“မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ၏တာဝန်မဲ့ရေးသားချက်” မဟတ္တမဂန္ဓီ ကို လုပ်ကြံတာ ဟိန္ဒူလား မွတ်စ်လင်မ်လား အဲဒီလောက်မှ မသိရင်လည်း သတင်းစာထုတ်စားမနေနဲ့တော့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Are Myanmar’s Hopes Fading?
ယုံချင်ပါတယ် သမ္မတရယ် ဒါပေမဲ့ »
တစ်စောင်လုပ်နေပြီး၊ ဒီလောက်ပညာမဲ့ရတယ်လို့။ 🙂
“မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ၏တာဝန်မဲ့ရေးသားချက်” မန္တလေးမြို.စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကထုတ်ဝေတဲ့ ၁၁-၅-၂၁၀၃ ရက်နေ့ထုတ်မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍမှာမဟတ္တမဂန္ဓီ၏ခြေညှပ်ဖိနပ်နှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များကိုဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် မေ ၂၁ ရက်၌လေလံတင်ရောင်းမည်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမဟတ္တမဂန္ဓီသည်မွတ်စလင်အစွန်းရောက် နာသူရမ်ဂေါ့ဒ်ဆေး၏လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဟုရေးသားထားပါသည်။တကယ်တော့ဂန္ဓီကိုလုပ်ကြံခဲ့သူဟာ ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တဦးကလုပ်ကြံခဲ့တာဆိုတာစာဖတ်ဖူးတဲ့သူ တော်တော်များများသိကြပါတယ်။လူသတ်သမားရဲ.နာမည်ကိုကြည့်ရင်ကို ဟိန္ဒူနာမည်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ဒါကိုမွတ်စလင်အစွန်းရောက်လို့ရေးတာဟာ တာဝန်မဲ့ရာကျပြီး မမှားသင့်တဲ့အမှားတခုကိုရေးသားလိုက်တာပါ။ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုရေးလိုက်တာလဲဆိုတာကိုတော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ ကလောင်နာမည် T.set ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလီမ့်မယ်။ဒီလိုလက်လွတ်စပယ်ရေးသားမှုအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တာဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။လူသတ်သမားဟာ အသက်၃၆ နှစ်အရွယ်ရှိလူမျိုးရေးအယူသီးသမား ပူနားမြို.မှ သတင်းစာအယ်ဒီတာ ဟိန္ဒူအမျိုးသား နာသူးရမ် ဂိုဒ်ဆီ ဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကို ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင်ရေးတဲ့ ” သွေးစွန်းသောနေ့ရက်များစာအုပ်”နဲ့ တင်ထွေးဘာသာပြန်တဲ့ “ကိုးနာရီ ” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted on May 13, 2013 at 5:16 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to ““မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ၏တာဝန်မဲ့ရေးသားချက်” မဟတ္တမဂန္ဓီ ကို လုပ်ကြံတာ ဟိန္ဒူလား မွတ်စ်လင်မ်လား အဲဒီလောက်မှ မသိရင်လည်း သတင်းစာထုတ်စားမနေနဲ့တော့”
May 13, 2013 at 5:39 am | Reply
He was shot dead byaHindu hardliner in New Delhi in 1948
Mahatma Gandhi’s slippers up for auction print
Published on May 10, 2013 by pmnews @ http://pmnewsnigeria.com/2013/05/10/mahatma-gandhis-slippers-up-for-auction/
A pair of sandals formerly owned by India’s independence hero Mahatma Gandhi is to go under the hammer in Britain later this month.
Mahatma Gandhi’s slippers: battered but expensive
Gandhi’s sandals were an instantly recognisable part of his image along with his glasses, loin-cloth, shawl and staff.